MMEMME MAKA ỊKPA NKATA - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Isi Ịhọrọ usoro ihe omume
Mmemme maka ịkpa nkata
Ka ikuku siri ike na-arụ ọrụ zuru oke, ọ ghaghị ịhazi ya. Tụkwasị na nke ahụ, ntọala ziri ezi ga-eme ka ọ hụ na ọ bụ ọrụ ngwa ngwa ma kwụsie ike, kamakwa ịgbatị ọrụ ndụ ya. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi na kpọmkwem ntọala dị mkpa maka SSD.
Ụzọ iji hazie SSD iji rụọ ọrụ na Windows
Anyị ga-elebakwu anya na nhazi optimization SSD site na iji ihe atụ nke sistemụ arụmọrụ Windows 7. Tupu ịmalite ntọala, ka anyị kwuo okwu ole na ole banyere otu ụzọ e si eme nke a. N'ezie, ị ga-ahọrọ n'etiti akpaka (site n'enyemaka nke ụlọ ọrụ pụrụ iche) na akwụkwọ ntuziaka.
Usoro 1: Jiri SSD Mini Tweaker
Site n'enyemaka nke aka SSD Mini Tweaker, nyocha kachasị SSD bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a kpam kpam, ma e wezụga ọrụ pụrụ iche. Usoro nhazi a ga - azoputa oge, mana ka o nweghi ike ime ihe nile di mkpa.
Download SSD Obere Tweaker
Ya mere, iji bulite iji Sistemi Tweaker SSD, ịkwesịrị ịmalite usoro ihe omume ahụ ma chọpụta ihe omume achọrọ na igbe. Iji ghọta ihe omume a chọrọ ime, ka anyị gafee ihe ọ bụla.
TRIM bụ iwu nhazi nke na-enye gị ohere ikpochapụ sel dị iche iche site na nchịkọta nke anụ ahụ, si otú a na-amụbawanye arụmọrụ ya. Ebe ọ bụ na iwu a dị ezigbo mkpa maka SSD, anyị ga-ejikọta ya na ya.
Superfetch bụ ọrụ nke na - enye gị ohere ịmepụta usoro ahụ site na ịnakọta ozi banyere usoro mmemme a na - ejikarị eme ihe ma na - etinye modul ndị dị mkpa na RAM tupu oge. Otú ọ dị, mgbe ị na-eji ngwa ngwa-ala, ọrụ a abaghịzi mkpa, ebe ọ bụ na ọsọ nke ịgụ ihe na-amụba okpukpu iri, nke pụtara na usoro ahụ nwere ike ị gụọ ngwa ngwa ma rụọ usoro ahụ dị mkpa.
Prefetcher bụ ọrụ ọzọ nke na-enye gị ohere ịbawanye ọsọ nke sistemụ. Ụkpụrụ nke ọrụ ya yiri ọrụ gara aga, ya mere maka SSD ọ nwere ike ịnọ n'enweghị nsogbu.
Debe usoro isi na ebe nchekwa
Ọ bụrụ na kọmputa gị dị 4 ma ọ bụ karịa gigabytes nke RAM, mgbe ahụ ịnwere ike ịchekwa igbe ahụ na-esote nhọrọ a. Ọzọkwa, ịtụkwasị kernel na RAM, ị ga-agbatị ndụ nke ụgbọala ma nwee ike ịbawanye ọsọ nke sistemụ arụmọrụ.
Gbanwee usoro nchịkwa faịlụ faịlụ
Nhọrọ a ga-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ohere disk, ma, ya mere, gbasaa ndụ ya. A ga-echekwa ebe a na-ejikarị eme ihe na disk ahụ na RAM dị ka oghere, nke ga-ebelata ọnụ ọgụgụ oku na-aga n'usoro faịlụ. Otú ọ dị, enwere ala ebe a - mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke ebe nchekwa. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ihe dịka gigabytes 2 nke RAM nke arụnyere na kọmputa gị, mgbe ahụ nhọrọ a kacha mma ka a ghara ịchecha.
Wepu njedebe site na NTFS n'okwu gbasara ebe nchekwa
Mgbe a gbanyere nhọrọ a, a ga-echekwa ihe ndị ọzọ na-agụ / dee, nke ga-achọ RAM ọzọ. Dị ka a na-achị, enwere ike ịgbanye nhọrọ a ma ọ bụrụ na ọ na-eji 2 gigabytes ma ọ bụ karịa.
Gbanyụọ mmebi nke faịlụ usoro n'oge buut.
Ebe ọ bụ na SSD nwere usoro dị iche iche nke ede data tụnyere draịvụ magnetik, nke na-eme ka ọ dị mkpa iji kpochapụ faịlụ n'enweghị ihe ọ bụla, ọ ga-agbanyụ.
Gbanyụọ ihe e kere eke nke faịlụ Layout.ini
Mgbe usoro a na-abaghị uru, a na-emepụta faịlụ Layout.ini pụrụ iche na folda Prefetch, nke na-echekwa ndepụta nke directories na faịlụ ndị eji ya mgbe arụ ọrụ sistemụ. A na-eji listi a na-eji eme ihe na-eji ndepụta a eme ihe. Otú ọ dị, maka SSD dị oke mkpa, ya mere, anyị na-ahụ nke a nhọrọ.
Gbanyụọ aha aha na usoro MS-DOS
Nhọrọ a ga-ewepu aha nke aha "8.3" (odide asatọ maka aha faịlụ na 3 maka mgbatị ahụ). Site n'ozuzu, ọ dị mkpa maka mmezi nke ngwa ngwa 16-bit maka iji rụọ ọrụ na MS-DOS. Ọ bụrụ na ịnweghị ngwanrọ dị otú ahụ, mgbe ahụ nhọrọ a ka mma iji gbanyụọ.
Gbanyụọ System Indexing System
Ejiri usoro nhazi edeputa iji nye ngwa ngwa maka faịlụ na nchekwa di mkpa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị ọchụchọ ọchụchọ, ịnwere ike iwepu ya. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na arụnyere sistemụ na SSD, nke a ga-ebelata ọnụọgụ ohere disk ma nyefee ohere ọzọ.
A na-ejikarị ọnọdụ egwu egwu eme ihe ngwa ngwa iji malite usoro. Na nke a, ọnọdụ nke usoro a ka echekwara na faịlụ usoro, nke na-abụkarị nha na RAM. Nke a na-enye gị ohere ijiri sistemụ arụ ọrụ na sekọnd. Otú ọ dị, ọnọdụ a dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji bọtịnụ magnet. N'ihe banyere SSD, nbudata n'onwe ya na-eme na ihe nke sekọnd, ya mere a nwere ike gbanyụọ ọnọdụ a. Na mgbakwunye, ọ ga-azọpụta ọtụtụ gigabytes nke ohere ma gbasaa ndụ ndụ.
Gbanyụọ Nche System
N'igosipụta atụmatụ nchedo usoro, ị ga - azọpụta naanị ohere, mana ị ga - agbatịwanye ndụ ndụ nke diski. Eziokwu bụ na nchebe nke usoro ahụ bụ ịmepụta ihe ịchịkwa, nke olu ya nwere ike ịdị na pasent 15% nke ngụkọta mpịakọta niile. Ọ ga-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ịgụ / dee arụmọrụ. Ya mere, maka SSD ọrụ a ka mma.
Gbanyụọ ọrụ na-emebi emebi
Dika ekwuru n'elu, SSDs ekwesighi ime ka ndi mmadu mebie ya n'ihi ihe nchekwa nchekwa data, ya mere enwere ike ime ihe a.
Ejichapụla faịlụ faịlụ ahụ
Ọ bụrụ na ị na-eji faịlụ swap, ị nwere ike "gwa" usoro ahụ ị na-adịghị mkpa iji dozie ya oge ọ bụla ị gbanyụrụ kọmputa ahụ. Nke a ga-ebelata usoro arụmọrụ na SSD ma gbasaa ndụ ndụ.
Ugbu a na ị debere igbe niile dị mkpa, pịa bọtịnụ ahụ "Tinye Mgbanwe" ma malitegharịa kọmputa ahụ. Nke a mejupụtara nhazi SSD n'iji SSD Mini Tweaker.
Usoro 2: Iji SSD Tweaker
SSD Tweaker bụ onye inyeaka ọzọ na ntọala kwesịrị ekwesị nke SSD. N'adịghị ka usoro mbụ ahụ, bụ nke zuru oke n'efu, nke a nwere ma akwụ ụgwọ na nnwere onwe n'efu. Nsụgharị ndị a dịgasị iche, nke mbụ, na nhazi nke ntọala.
Download SSD Tweaker
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ahụ maka oge mbụ, mgbe ahụ site na ndabara, ị ga-ekele gị site na ntụgharị asụsụ Bekee. Ya mere, na ala aka nri ala họrọ asụsụ Russian. N'ụzọ dị mwute, ụfọdụ ihe ga-anọgide na Bekee, ma, ka o sina dị, ihe ka ukwuu n'ime ederede a ga-asụgharị n'asụsụ Russian.
Ugbu a laghachi azụ "SSD Tweaker" mbụ. N'ebe a, na etiti windo ahụ, bọtịnụ dị nke ga-enye gị ohere ịhọrọ ntọala disk na akpaghị aka.
Otú ọ dị, e nwere otu "ma" ebe a - ụfọdụ ntọala ga-adị na nsụgharị akwụ ụgwọ. Na njedebe nke usoro ahụ, usoro ahụ ga-enye gị ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọtaghi nghazi diski akpaka, ịnwere ike ịga akwụkwọ ntuziaka. Maka nke a, ndị ọrụ nke ngwa SSW Tweaker nwere taabụ abụọ. "Ntọala Ntọala" ma "Ntọala Di elu". Nke ikpeazụ gụnyere nhọrọ ndị ga-adị mgbe ị zụtara ikikere.
Tab "Ntọala Ntọala" Ị nwere ike ịme ma ọ bụ gbanyụọ ọrụ Prefetcher na Superfetch. A na - eji ọrụ ndị a iji mee ka sistemụ ahụ dị ngwa, ma site n'iji SSD ha efunahụ ihe ha pụtara, ya mere ọ ka mma iji gbanyụọ ha. Nhọrọ ndị ọzọ dịkwa n'ebe a, nke a kọwara na usoro mbụ nke ntọala ụgbọala. Ya mere, anyị agaghị eburu ha n'uche. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nhọrọ ahụ, mgbe ahụ, site na ịkụnye cursor na akara ahụ achọrọ, ịnwere ike ịnweta akara ngosi zuru ezu.
Tab "Ntọala Di elu" nwere nhọrọ ndị ọzọ na-enye gị ohere ijikwa ụfọdụ ọrụ, yana iji ụfọdụ atụmatụ nke usoro arụ ọrụ Windows. Ụfọdụ n'ime ntọala (dịka ọmụmaatụ, dị ka "Kwado Mbadamba ụrọ PC" ma "Kwado Egwuregwu Okwu") ọzọ na-emetụta ọsọ ọsọ nke usoro ahụ ma ọ dịghị emetụta ọrụ nke ndị na-arụ ọrụ siri ike.
Usoro 3: Hazie SSD aka
Na mgbakwunye na iji ngwaọrụ pụrụ iche, ị nwere ike ịhazi SSD n'onwe gị. Otú ọ dị, na nke a, enwere ike ime ihe na-ezighị ezi, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụghị onye nwere ahụmahụ. Ya mere, tupu ịmalite ime ihe, mee ka ebe weghachite.
Lee kwa: Otu esi eme ka ebe weghachite na Windows 7
Maka ọtụtụ n'ime ntọala anyị ga - eji nchịkọta akụkọ nchịkwa. Iji meghee ya, ị ghaghị ịpị igodo ahụ "Merie R" na window Gbaa ọsọ tinye iwu "regedit".
Gbanye iwu iwu.
Nke mbụ, ka anyị gbanwee iwu TRIM ahụ, nke ga-eme ka arụ ọrụ ngwa ngwa nke ụgbọala siri ike. Iji mee nke a, gaa na nchịkọta akụkọ na ụzọ ndị a:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet ọrụ msahci
N'ebe a anyị na-ahụ oke "ErrorControl" ma gbanwee uru ya "0". Ọzọkwa, na oke "Malite" tinyekwa uru ahụ "0". Ọ ugbu a ka ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Ọ dị mkpa! Tupu ị gbanwee ndekọ ahụ, ịkwesịrị ịtọ ọnọdụ AHCI nchịkwa na BIOS kama SATA.
Iji chọpụta ma mgbanwe ọ dị irè ma ọ bụ, ịkwesịrị imepe onye njikwa ngwaọrụ na alaka ụlọ ọrụ IDEATA lee ma ọ bara uru AHCI. Ọ bụrụ na ọ bụ, mgbe ahụ, mgbanwe agbanweela.
Gbanyụọ ntinye aha data.
Iji gbanyụọ njigide data, gaa na njirimara nke diski disk ma wepu igbe ahụ "Kwe ka ndetu ọdịnaya nke faịlụ na diski a na mgbakwunye na faịlụ faịlụ".
Ọ bụrụ na ọ na-eme ka ịchọta ntinye aha data, usoro ahụ na-akọ na ọ bụ njehie, mgbe ahụ, ọ ga-abụ na ejikọtara ya na faịlụ ahụ. Na nke a, ịkwesịrị ịmalitegharịa ma megharịa ihe ahụ ọzọ.
Gbanyụọ faịlụ paging.
Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere ihe na-erughị 4 gigabytes nke RAM, mgbe ahụ, a ga-awụpụ ihe a.
Iji gbanyụọ faịlụ na-egwu egwu, ịkwesịrị ịbanye na ntọala arụmọrụ na na ntọala dị elu, ị ghaghị ịchọta igbe ahụ ma nye aka "na-enweghị faịlụ nchịkọta".
Lee kwa: Achọrọ m faịlụ nkesa na SSD
Iji belata ibu na SSD, ị nwere ike iwepu ọnọdụ mkpuchi. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịga ọsọsọ ọsọsọ dịka onye nchịkwa. Gaa na menu "Malite"wee gaa"Mmemme niile -> Standard"na ebe a anyị na-pịa nri na nri "Iwu Iwu". Ọzọ, họrọ mode "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta". Ugbu a tinye iwu"ikecfg -h"ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ikpo ọkụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eji iwu ahụikecfg -h na.
Gbanyụọ mmemme Prefetch.
Akwụsị ọrụ mmemme na-eme site na ntọala ndekọ, ya mere, na-agbazi nchịkọta akụkọ ma gaa n'alaka ụlọ ọrụ ahụ:
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / SessionManager / MemoryManagement / PrefetchParameters
Mgbe ahụ, maka oke "EnablePrefetcher" tọọ uru ka 0. Pịa "OK" ma malitegharịa kọmputa ahụ.
SuperFetch bụ ọrụ nke na-agbalite usoro, ma mgbe ị na-eji SSD ọ dịghị mkpa. Ya mere, o nwere ike inwe nsogbu n'enweghị nsogbu. Ime nke a site na menu "Malite" meghee "Ogwe njikwa". Ọzọ, gaa "Nchịkwa" na ebe a ka anyị meghere "Ọrụ".
Window a gosipụtara ndepụta zuru ezu nke ọrụ dị na sistemụ arụmọrụ. Anyị kwesịrị ịchọta Superfetch ahụ, jiri bọtịnụ aka ekpe aka ekpe ya ugboro abụọ ma wụnye ya Ụdị mmalite na steeti "Nkwarụ". Ọzọ, Malitegharịa ekwentị ahụ.
Gbanyụọ windo cache Windows.
Tupu ịkwụsị ọrụ nchịkwa cache, ọ bara uru iburu n'uche na ọnọdụ a nwere ike imetụta mmetụta nke ụgbọala. Dịka ọmụmaatụ, Intel anaghị akwado ịmecha mkpuchi nsogbu maka diski ya. Ma, ọ bụrụ na ị ka kpebiri iwepụ ya, ị ghaghị ime ihe ndị a:
Gaa na njirimara nke usoro diski;
Gaa taabụ "Akụrụngwa";
Họrọ SSD chọrọ ma pịa bọtịnụ ahụ "Njirimara";
Tab "General" pịa bọtịnụ ahụ "Gbanwee ntọala";
Gaa taabụ "Ọchịchị" ma tuo nhọrọ "Gbanyụọ ihe mkpuchi ịche";
Ọ bụrụ na ị chọpụta na arụmọrụ disk adabaala, mgbe ahụ ịkwesịrị ịchọta ya "Gbanyụọ ihe mkpuchi ịche".
N'ime ụzọ kachasị mma SSD ndị a tụlere ebe a, onye kasị dịrị nchebe bụ nke mbụ - iji ụlọ ọrụ pụrụ iche. Otú ọ dị, a na-enwekarị mgbe ọ bụla a ga-arụ ọrụ niile aka. Nke kachasị mkpa, echefula ịmepụta ebe ịmeghachị usoro tupu ịme mgbanwe ọ bụla; ọ bụrụ na ọ bụla ọdịda, ọ ga-enyere aka weghachite sistemụ arụmọrụ na sistemụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ịhọrọ usoro ihe omume 2019